Johane Chitsauko 05. Vanotenda vanosarudza Vatungamiri Vezvitendero panzvimbo peShoko raMwari
» Shona » Zvidzidzo zveBhaibheri » Johane Chitsauko 05. Vanotenda vanosarudza Vatungamiri Vezvitendero panzvimbo peShoko raMwari
Johane Chitsauko 05. Vanotenda vanosarudza Vatungamiri Vezvitendero panzvimbo peShoko raMwari
Muchitsauko 4 Jesu aive kuSamaria pakati penguva yechando, mwedzi mina kukohwa kusati kwatanga. Kukohwa kubviswa kwembeu kubva pamuti wadzakaberekwa. Bari ndicho chirimwa chekutanga kuibva kuti chikohwewe. Pakati pemwedzi waKubvumbi kukohwewa kwebari kunotanga panguva yemutambo wePaseka, mutambo mukuru. Izvi zvinoitika pamwechete nemutambo wechingwa chisina mbiriso unoitwa kwemazuva manomwe. Tichiwedzera, bari inotanga kuibva inopembererwa pamutambo wezvibereko zvekutanga.
Paseka inomiririra Kristu achiuraiwa seGwaiana rechibairo paCalvari. Zvibereko zvekutanga zvinomiririra kumuka kwake apo anotanga kumuka kubva kuvakafa mazuva matatu mumashure mekufa kwake, vatsvene veTestamente Yekare vasati vakohwewa pavakabviswa kubva kumakuva avo panyika mumashure mekumuka kwaKristu kubva kuvakafa. Kukohwa kwakapedziswa pakabviswa vatsvene veTestamente Yekare panyika pazuva rekukwira kuDenga pavakaonekwa vanaye segore, paaienda kuDenga mazuva makumi mana mumashure mekumuka kwake. Saka kukohwa kweTestamente yekare kwakatora mazuva anosvika makumi mana apo vatsvene veTestamente Yekare vaibviswa panyika, vakatorwa kubva panyika vachikwira kudenga. Iri ndiro raive goho raive raibva rakaonekwa naJesu kuna Johane Chitsauko 4 paaive kuSamaria.
Mazuva manomwe echingwa chisina mbiriso anomiririra Mweya Mutsvene waizotungamirira kereke mukati menguva nomwe dzemakereke.
Mitambo mitatu yekutanga iyi yaive pedyo nepedyo. Mazuva makumi mashanu akazotevera kukohwewa kwegorosi kwakatanga nguva yakapoteredza nguva yemutambo wePentekosita. Izvi zvinomiririra Zuva rePentekosita apo Mweya Mutsvene wakazadza vadzidzi vakatanga kereke yekutanga. Mbeu inoshamisa yevatendi vakazvipira yakava muenzamiso uyo vatendi vekereke yekupedzisira vanofanira kudzoserwa kwauri. Mbeu inokohwewa inofainira kufanana nembeu yakadyarwa.
Kwakabva kwaita mukana wemwedzi yakati pakati penguva kuti kuuye mitambo miviri, weHwamanda uye weMatumba inoitwa munaGumiguru zvese nezuva rekunatswa. Kukohwewa kwemizambiringa kunoitwa nguva iyi.
Hwamanda mbiri dzinodaidza maJuda kuti vadzoke kuIsraeri munguva yeKutambudzika kukuru zvinomirira maprofita maviri Mosesi naEria. Zuva reKuyananisirwa ndipo maJuda 144000 vachasangana naJesu voona mavanga ezvipikiri mumaoko make. Mutambo weMisasa unozivikanwawo semutambo weMatumba, unomiririra dzimba dzichavakwa nemaJuda mumakore 1000 erugare, anozivikwanwa nekunzi Mereniyamu.
JOHANE 5:1 Shure kwaizvozvo, mutambo wavaJuda waivapo; Jesu akakwira Jerusarema.
Nguva yechando yaive yadarika iyi yaive yanguva yekukohwa, vachitanga nekukohwa bari. Mutambo uyu waive mutambo wekutanga wePaseka kana kuti umwe wemitambo yaiuya mumashure mePaseka.
JOHANE 5:2 Zvino paJerusarema pedo nesuvo ramakwai kwaiva nedziva rainzi Betsaida nechiHebheru, raiva namabiravira mashanu.
Betsaida zvinoreva kuti “imba yenyasha”. Nyasha chiratidzo chetsitsi dzaMwari, zvinoreva rudo rwake rwatisina kufanira nekuti hatigoni kuzviponesa. Nyasha dzedu dzinobva pachibayiro chaJesu pamuchinjikwa. Zvipikiri zvakaroverwa pamavoko ake maviri netsoka dzake mbiri. Pfumo rakabaya rutivi rwake. Maronda mashanu akadzika. Saka chiverengo chechishanu chicharamba chiri chiverengo chenyasha netsitsi. Achatakura mavanga iwayo semuyeuchidzo usingagumi kwatiri wemuripo waakaripira pamusoro pezvivi zvedu. Mabhuku mana eEvangeri akamira akapoteredza Bhuku raMabasa. Evangeri rinotsanangura kugadzira kwakaita Kristu nzira yekereke yekutanga kuti itange basa, vari pasi peMweya Mutsvene, pavaiparidza nhau yakanaka yenyasha dzaMwari netsitsi dzake kuvanhu.
Mvura inotaura pamusoro peShoko raMwari apo Mwari anoda kunatsa zvinotendwa nevanhu vake uye hunhu hwavo.
VAEFESO 5:26 Kuti aiite tsvene achiinatsa nokushambidza kwemvura pashoko,
Dziva reBetsaida, imba yenyasha, raive nemabiravira mashanu aishandiswa kupinda mumvura.
Johane akaona zvisikwa zvipenyu zvina zvakapoteredza chigaro chaMwari cheHushe kuna Zvakazarurwa Chitsauko 4.
Zvishanu izvi zvinomiririra Simba raMwari rekubatsira kereke mukati memakore 2000 enhorondo.
Shumba inomiririra Shoko rechokwadi remapostora rakakushwa mukati menguva yekereke yekutanga. Nzombe inomiririra kushanda nekuuraiwa kwekereke munguva dzerima apo makumi emamiriyoni emaKristu akauraiwa. Munhu anomiririra ruzivo rwevamutsiridzi vakaita saMartin Luther naWesley vakadzosa kereke pakupona nenyasha uye hutsvene nekuparidzira kwakatungamirira kusvika panguva yemamishinari. Gondo rinobhururuka apo vhuserere yePentekosti yakadzosa zvipo zvemweya unoshamisa. Asi ziso regondo rinopinza rinokurudzirawo mupostora wenguva yekupedzisira nemuono wakadzama muzvakavanzika zveMagwaro izvo zvega zvinogona kudzosera vatendi venguva yekupedzisira pakutenda kwekereke yekutanga yemapostora.
Aya ndiwo mabiravira mashanu ega atinokwanisa kusvika nawo paShoko raMwari rechokwadi kuti risuke kusatenda kwedu kwemasangano. Masimba mana emweya, anotungamirira kuti tisvike pasimba repakati raMwari agere pachigaro chehushe.
Chisikwa chipenyu chimwechete ndicho chinokurudzira nguva imwechete yekereke pachinotungamirira nguva iyoyo kuenda kuchigaro chaMwari chehushe. Gondo mutumwa mumwechete kana nhume parinotitungamirira kuShoko renguva yeShumba pakatangira Shoko raMwari. Nguva yenzombe nenguva yemunhu dzakanyangarika munhorondo hadzichina zvizhinji zvekuita nesu. Dzinomiririra kukura kwemuti wekereke panguva dziri pakati pekudyarwa nekukohwewa. Asi izvi zvakaitika, hazvichadzokororwe. Saka kukosha kwapashumba, Mbeu yeShoko raMwari rakadyarwa nemapostora. Nei izvi zvakakosha? Nekuti gondo rinobhururuka rinomiririra kukohwa apo Mbeu inobviswa kubva pamuti wekereke wakafa, yotorwa kukwira kudenga.
Mbeu inokohwewa chete kana muti wayakaberekwa pauri wafa. Saka kereke yechinomwe yeRaodikia yakatukwa kunaZvakazarurwa Chitsauko 3. Nguva yekereke yekupedzisira yeRaodikia inofa apo Mwari anoisvipa kubva mumuromo make.
16 Zvino zvaunodziya, usingatonhori kana kupisa, ndichakusvisvina mumuromo mangu,
Izvi zvinotsaura kereke kubva kuna Mwari. Vanhu vakadzoserwa kukereke yekutanga chete yemapostora ndivo vachakohwewa pavachabviswa kubva panyika vachikwira kuDenga.
"mufudzi wemakwai ": Mwari anoona vanhu vake semakwai ake.
JOHANE 10:2 Asi unopinda napamukova, ndiye mufudzi wamakwai.
Jesu ndiye mukova. Ndiye Shoko raMwari rakanyorwa. Nekutenda zvakanyorwa muBhaibheri chete ndipo patinogona kumutevera.
Zvisikwa zvipenyu zvina zvakapoteredza chigaro chaMwari chehushe hazvaifanira kuzviitira vateveri. Zvaifanira kutungamirira vanhu kuenda kunaJesu, agere pachigaro chaMwari chehushe.
JOHANE 10:3 Murindi womukova unomuzarurira iye, makwai anonzwa inzwi rake, unodana makwai ake namazita awo, nokuakokera kunze.
Murindi munhu (chero muvhangeri, kana muparidzi, kana mudzidzisi) anozarura mukova anotendera Mufudzi (Jesu) kuti azvitungamirire ega makwai ake. Makwai haafi akatevera murindi. Vanhu vanoparidza vanounza vatadzi kunaKristu kuti vaponeswe chinova chinhu chakanaka. Mumashure maizvozvo vanonyengera vanhu vanenge vatendeuka ava nenzira dzakanakisa kwazvo kuti vatevere vanhu vanotungamirira. Saka maKristu vanoguma vava vanhu vekereke semaKristu echinzvimbo chepiri, pachinzvimbo chekuva vaJesu weBhaibheri.
Kukanganisa kukuru kwemakereke kuri pakusarudza vanhu vanotungamirira vanofanirwa kuteverwa nemakwai.
Mufudzi mumwechete wemakwai ndiJesu. Munhu mumwe nemumwe anofanira kusangana neruponeso munaJesu apo Jesu, seMunhu, neBhaibheri rakanyorwa, senheyo dzekutenda, zvinotora nzvimbo yekutanga muhupenyu hwedu. Vanhu vanokwanisa kutibatsira mukufamba kwedu naMwari, asi hatina kubvira tanzi titevere mapasita anhasi kana makereke anhasi. Vanhu vanogona kukubatsira kuti utevere Jesu, asi havafaniri kubvira vakuitai kuti mutevere ivo.
"Teverai pasita wenyu sezvo achakuyambutsai" Harisi vhesi ramunowana muBhaibheri. Kuisa meso enyu pana pasita zvinogoneka chete kana mabvisa meso enyu pana Jesu.
Kutevera pasita kunotungamirira kuti munhu aparare pamweya nekuti hamugoni kurwira zvamunotenda kubva muBhaibheri. Munobva maita maKristu enzvimbo yepiri nekudzokorora zvinotaurwa napasita uye zvaanofunga, pachinzvimbo chekungotaura zvakanyorwa muBhaibheri. Munenge musisina zvamunoita zvinobva pamafungiro enyu. Munenge muchifanira kugara muchifunga zvinodiwa napasita wenyu kuti mutende mazviri.
JOHANE 10:4 Kana abudisa makwai ake ose, unoatungamirira; makwai anomutevera, nokuti anoziva inzwi rake.
Makwai, isu maKristu, tinofanira kutevera Jesu chete. Kwete munhuwo zvake. Kwete pasitawo zvake. Paive pasina chinzvimbo chaPasita muTestamente yekare, asi muprofita Jeremia muchiratidzo chake akaona pasita (mufudzi asiri shepadhi) munguva inouya akaprofita pamusoro pavo paakavatuka katanhatu. Hushumiri hwakaipa kwazvo uye huri nyore kun’oresa munhu zvekuti Testamente Itsva yakataura pamusoro papasita kamwechete.
Kana pasita achitungamirira kereke yenyu, ndapota rangarirai kuti hamuna nheyo dzeBhaibheri dzinotsigira chimiro chekereke yenyu.
Tinofanira kutevera Magwaro sekuziviswa kwaanoitwa kwatiri naMwari. Mwari anotitungamirira neBhaibheri chete.
I VATESARONIKA 4:16 Nokuti Ishe amene uchaburuka kudenga nokudanidzira, nenzwi romutumwa mukuru, nehwamanda (trump) yaMwari; vakafa munaKristu vachatanga kumuka;
Bhaibheri rinotipa gwara . Chiratidzo chenguva.
Izwi rekuti “hwamanda” (trump) rakataurwa panguva inotaurwa pamusoro pekumutswa kwevakafa.
Sarudzo dzemutungamiri wenyika yeAmerica dzakakwikwidzwa zvinotyisa muna 2016 dzakatikandira “Trump” kuzviso zvedu. Hutungamiri hwake husina matyira hwakaita kuti “Trump” agare ari pamisoro yenyaya mumapepanhau. Nenzira isingajairiki vanhu vanowanzomudaidza vachiti “The Trump” nenzira yazvakanyorwa nayo muMagwaro, “hwamanda” (“the trump”). Saka Mwari vari kumushandisa sechiratidzo chenguva. Tava pedyo nekumutswa kwevakafa. Nei Trump akakosha? Nekuti pakutsvaga kwake kwaaiita rutsigiro akavimbisa kuti aizoita Jerusarema guta guru reIsraeri. Izvi zvakazadzisa chiprofita. Kuzadzisa zvakaprofitwa kwakakosha kudarika zvimwe zvinhu zvese munguva yedu. Zvakatokosha kudarika kudiwa kunoitwa anozadzisa chiprofita chacho.
Mapasita emharidzo akarasika papi pavakataura kuti Trump aizokundwa musarudzo? Vakaturikira zvakataurwa pamusoro pemukadzi aizotonga America vachiti zvaireva kuti Hillary ndiye aizokunda musarudzo. Uku kwaive kurasika kukuru: Magwaro akanyorwa achikwikwidzana nekuturikirwa kwemashoko akataurwa nevanhu. Mapasita emharidzo akabva arasika zvakazara, zvinoreva kuti vakapesana kare nekufunga kwaMwari. Asi vanhu vemharidzo vakarasiswa vanoramba vachivatevera nekuturikira kwavo kwavanoita zvakataurwa kunorwisa Magwaro, nekuti hapana pakati pevanhu nevafundisi vavo anoziva kuti voturikira sei Magwaro akanyorwa.
Mapasita emharidzo vanongodzokorora zvakabatwa paitaurwa nevanhu,
“Pasita ndiye musoro wekereke”.
Hakuna Gwaro rinotaura izvi. Ava vanodaidzwa kuti “misoro yemakereke” (vanotiyeuchidza pamusoro pechikara chemisoro minomwe kuna Zvakazarurwa 13) vakarasika zvakazara pamusoro peAmerica. Tisingatauri kuti mapasita aya haatenderane iwo pachawo pamusoro pedzimwe dzidziso. Izvozvi munhu anodaidzwa kuti wemharidzo anofanira kutenda zvinotendwa nekereke yemharidzo yaanoenda.
("Kereke yeMharidzo" Hazvimo muMagwaro.
"Izwi raMwari" kutaura kusimo muMagwaro eTestamente Itsva).
Mapasita akasiyana siyana vanotsvanzvadzira vasinganyatsooni mukati memhute yemifungo yavo yakatiza paMagwaro kare. Zvitendero zvinobva panzvimbo dzakapoteredza vanhu. Chero zvinoparidzwa kurutivi rwenyika rwamuri, munofanira kutenda mazviri. Mukatenderera nenyika zvamunotenda zvinoshandukawo nekuti mapasita ari munzvimbo dzakasiyana anotenda zvakasiyana. Asi kwese kwamunoguma masvika, pasita weko anenge achitarisira kuti muwirirane nekutenda kwake. Bofu rinotungamirira bofu. Nguva yeKutambudzika kukuru ndiro gomba rakamirira vese vanotenda mune zvimwe zvinhu zvisiri muBhaibheri.
JOHANE 10:5 Asi mweni haangatongomuteveri, asi anomutiza; nokuti haazivi inzwi ravaeni.
Tizai kubva kumapasita kana vaparidzi kana chero munhu asingatauri kubva kuShoko raMwari rakanyorwa.
Muparidzi anofanira kukuitai kuti mutende kune zvakanyorwa muMagwaro chete.
Bhaibheri reKing James Vhezheni rakanyorwa ndiro chete “Izwi raMwari”.
Hatina kubvira tavimbiswa Izwi raMwari kunguva yekupedzisira, izwi remutumwa wechinomwe chete nekudanidzira kwake, paanopedzisa zvakavanzika zvaMwari nekutidzosera kudzidziso dzemadzibaba edu mapostora veTestamente Itsva. Saka kana muchida kwazvo kutevera vanhu, teverai Pauro motenda zvaakanyora muTestamente Itsva. Pauro anobvumirana nezvakanyorwa nemamwe mapostora. Uye kana mukatanga kutevera mapostora ekutanga enguva yekereke yekutanga, munoona kuti vanoramba vachikunongedzerai kunaKristu, kwete kwavari ivo pachavo. Pamunotevera Jesu nemapeji eBhaibheri, munowana nzira munguva dzedu dzinorwadza. Mukaenda neimwe nzira munozongotatarika mokurirwa nezviitiko zvinokuwirai.
Tiriniti, Kisimusi, Masangano, Mwari Mwanakomana, Mwari mumwechete muVanhu vatatu, William Branham ndiye Mukuru wedu. Uku kwese kutaura kusimo muBhaibheri.
Zvakataurwa neKutinhira kunomwe hazvina kunyorwa muBhaibheri saka hazvigoni kuzivikanwa nesu kumutswa kwevakafa kusati kwaitika.
Zita idzva raJesu harizivikanwe nechero munhu.
Zvinhu izvi zvose hazvina kunyorwa muBhaibheri, asi vanotenda mazviri vazhinji.
Mapasita eMharidzo vanoti vanoziva zita idzva iri. Vanhuwo vakadzungaira zvekuti vanotenda zvanotaurwa nemapasita zvisinei nekuti Bhaibheri rinoti zita harina kuzikanwa nomumwe munhu.
Vatungamiri vemakereke vanotaura pamusoro penyaya idzi vanenge vachingorasisa vamwe vanhu.
JOHANE10:7 Zvino Jesu akati kwavari zve: Zvirokwazvo, zvirokwazvo, ndinoti kwamuri: Ndini mukova wamakwai.
10:7 zviverengo zvinodakadza. Zuva rechi 10 mwedzi wechi 7 ndiyo yega nguva apo muPrista mukuru aikwanisa kupinda muzvakavanzika zvaive kuseri kwechidzitiro cheTembere. Pazuva iri rekuyananisirwa, munhu mumwechete chete ndiye aikwanisa kuona zviri kuseri kwechidzitiro kuti asangane nezaruriro yezvaiitwa naMwari kuseri kwechidzitiro.
10:7 rinoonekwa kuna Zvakazarurwa.
10:7 zvinoyananawo nemukova wakazarurwa wezaruriro yezvakavanzika zveBhaibheri.
Zviratidzo zvakateedzana mugore 1963, zvakaunzwa kwaari nevatumwa vanomwe, zvakatendera mutumwa wenguva yekupedzisira kuti aone zviri kuseri kechidzitiro chenguva, nekudaro akawana zaruriro yekuzarurwa kweZvisimbiso zvinomwe. Chiitiko chenguva inouya ichi chekuzarurwa kweZvisimbiso zvinomwe chichaitika kana Mwenga waKristu atorwa akwira kuDenga. Asi nekuona chiitiko ichi chisati chaitika, muprofita akakwanisa kudzoka kunguva yedu akazivisa zvakavanzika zveMagwaro zvichaita kuti isu tigone kuverenga Bhaibheri nekurinzwisisa, nenzira yarakanzwisiswa nayo nekereke yekutanga. Kana kereke yenguva yechinomwe ikatanga kutenda chaizvo zvakatendwa mazviri nekereke yekutanga, zvakavanzika zvaMwari zvinobva zvapedziswa Ishe ouya.
Todzokera kunaJohane Chitsauko 5.
JOHANE 5:3 Mukati mawo makanga muvete vazhinji vairwara namapofu, nezvirema, navakawonyana, vakamirira kubvongodzwa kwemvura.
Pamweya izvi zvaive mucherechedzo wechimiro chaive nemaJuda muzuva raJesu. Zvinoenderanawo nemafungiro aMwari pamusoro pekereke yeRaodikia munguva yedu yekereke yechinomwe, yaanotsanangurawo achiti ibofu. Kuuya kwechipiri kusati kwasvika kereke iri muchimiro chimwechete chaive nemaJuda panguva yeKuuya kwaJesu kwekutanga.
JOHANE 5:4 Nokuti mutumwa waiburukira mudziva iro neimwe nguva, achibvongodza mvura; zvino uyo waitanga kupinda mumvura yabvongodzwa waiporeswa, kunyange akanga akabatwa nokurwara kupi nokupi.
Kubva pakuratidzika kwenguva nomwe dzekereke kwaive nevarindi vanomwe vaizarura mukova kuti makwai atevere mufudzi, Jesu, paaiziviswa kwavari munguva dzavo muMagwaro. Nguva imwe neimwe yekereke yaive nemutumwa (nhume) aibvongodza Shoko raMwari kwavari. Luther akabvongodza kuponeswa nenyasha kupfurikidza kutenda. Wesley akabvongodza hutsvene nekuparidzira. Muparidzi wePentekosita akabvongodza zvemweya unoshamisa aive William Branham uyo, tichiwedzera, akabvongodza zaruriro yezvakavanzika zveMagwaro.
Asi nguva imwe neimwe yakanyangarika paipera mvura nekuti nguva imwe neimwe yaibva yazotanga kutevera mutumwa kana kuti munhu aitungamirira kereke. Basa remutumwa mumwe nemumwe raive rekuita kuti vanhu vatendeuke vachitevera Jesu neBhaibheri zvakanaka. Asi maKristu echinzvimbo chepiri akaona zviri nyore kwazvo kutevera vanhu vanotungamirira, semotokari dzaparara munjodzi dzinoendeswa kumarara. Vanhu vakamira kuzvifungira, vakatevera vanhu vaivatungamirira, vakangotanga kudzokorora zvavakabata paitaura vanhu ivavo.
Kubva pachimiro chaive nemaJuda paKuuya kwaJesu kwekutanga, chiitiko chepadziva ichi mucherechedzo werwendo rwavo rweeksodo yekutanga vachienda kuNyika yeChipikirwa.
JOHANE 5:5 Zvino kwaivapo mumwe munhu, wakanga abatwa nokurwara kwake makore makumi matatu namasere.
Nei akanga achirwara kwemakore makumi matatu nemasere? Aimiririra rudzi rwemaJuda ruri pasi paMosesi, akasvika Kadeshi Barnea pamuganhu weNyika yeChipikirwa, akaita sarudzo yakaipa kwazvo yekuti ivo vaive vasina kusimba zvekugona kukunda vanhu vaigara muNyika yeChipikirwa. Vakakanganwa kuti Mwari ndiye aizovarwira hondo iyi. Saka Mwari akavaita kuti vadzungaire murenje kwemakore makumi matatu nemasere kusvikira vafa. Vana vavo ndivo vaizotenderwa kupinda kunogara munyika yeChipikirwa yaitangira paBroki Zeredi.
DEUTERONOMIO 2:14 Zvino mazuva okubva kwedu paKadeshi-barnea kusvikira tayambuka rukova Zeredi, aiva makore makumi matatu namasere; kusvikira rudzi rwose rwavarume vehondo vaparadzwa pakati pemisasa, sezvavakanga vapikirwa naJEHOVA
15 Uye ruoko rwaJEHOVA rwairamba ruchirwa navo, kuti vaparadzwe pakati pemisasa kusvikira vapera.
MaJuda vaive vapererwa vari murenje kwemakore makumi matatu nemasere pavaingofamba vachitenderera vasina kwavaienda. MaKristu vaenda kumakereke kwemakore, asi vanoziva zvishoma kwazvo pamagumo avo kudarika zvavaiziva makore adarika vasati vapinda mukereke.
Zvaive murume uyu zvaimiririra makore makumi matatu nemasere akatambiswa nemaJuda vari murenje.
"Kuita nhengo yekereke” kana kuti “uri wekereke ipi?” Kwese kutaura kusiri muMagwaro.
JOHANE 5:6 Jesu wakati avona munhu uyo avete pasi, zvaaiziva kuti wakanga akadaro nguva huru, akati kwaari: Unoda kuporeswa here?
JOHANE 5:7 Murwere akamupindura, akati: Ishe, ndinoshaiwa munhu unondiwisira mudziva, kana mvura ichibvongodzwa; asi ndinoti kana ndoenda. Mumwe wonditangira kupinda.
Munhu uyu aive asina munhu aikwanisa kumubatsira kumukandira mudziva, sezvaive maJuda pavaive murenje. Chero mutungamiri wavo mukuru Mosesi aisakwanisa kuvatungamirira kupinda muNyika yeChipikirwa.
Mosesi aimiririra Murairo, Joshua aimiririra nyasha.
Kushanduka kwehutungamiri kwaidiwa kuti maJuda agone kupinda muIsraeri. Munhu uyu akazowana mutungamiri wake wechokwadi, Jesu. Meso ake ava panaJesu asisateveri vamwe vanhu kana kuvimba nerubatsiro rwevanhu, munhu akashandurwa akaponeswa.
JOHANE 5:8 Jesu akati kwaari: Simuka, tora nhovo dzako, ufambe.
Makore makumi matatu nemasere ehupenyu hwakatambiswa aive apera.
Joshua akaita kuti maprista atakure areka sechiratidzo chesimba raMwari pamapfudzi avo pavaipinda muNyika yeChipikirwa.
Jesu akaita kuti murume airwara uyu atakure nhowo yake pamapfudzi pake semucherechedzo weSimba raMwari pamusoro pehurwere.
JOHANE 5:9 Pakarepo munhu uyo akaporeswa. Akatora nhovo dzake,. akafamba Musi uyo waiva wesabata.
Sabata kumaJuda raive zuva rekuzorora, musi weMugovera.
Uyu mucherechedzo werubapatidzo rweMweya Mutsvene, runotiita kuti tizorore kubva kuzvivi zvedu uye kusatenda kuMagwaro.
Mumashure mekuzorora, Mwari haana kubvira adzokera pabasa rekusika zvakare. Asi kuzorora musi weMugovera modzokera pabasa zuva rinotevera kwaive kusiri kuzorora sezvakaitwa naMwari.
Zvisinei, kugamuchira Mweya Mutsvene kunotiita kuti tibve kumabasa edu ezvivi akaita sekuba, kunyepa, kubhema, kumwa zvinodhaka, kuita majee akaipa nezvimwe zvakadaro. Hatizodzokere kumabasa ezvivi aya zvakare.
Saka rubapatidzo rweMweya Mutsvene ndiro zororo rechokwadi.
Sabata zvinoreva kuti zororo. Mweya Mutsvene unotizorodza kubva kuzvivi.
Rubapatidzo rweMweya Mutsvene ndipo panouya chikamu cheMweya Mutsvene waMwari matiri kuzotonga hupenyu hwedu. Chiitiko ichi chinoita kuti munhu atevere Jesu neMagwaro.
Zuva rechinomwe raMwari ndicho chiuru chemakore chinotevera mumashure meAmagedhoni. Tobva taona simba rake rechokwadi.
JOHANE 5:10 Zvino vaJuda vakati kuno wakaporeswa: Isabata, hautenderwi kutakura nhovo dzako.
Nekutaura kuti kupopeswa kwake kwaive kushanda, maJuda vaimhura Mwari nekuti chero zvipfuwo zvavo zvaitoendeswa kunomwa mvura musi weSabata. Uye kana vaiona chipfuwo chinorwara, vaizochibatsira nekuchirapa musi weSabata. Kana chipfuwo chaiwira mugomba, vaisachirega kuitira Sabata. Vaizochiburitsa.
Chokwadi chakanyorwa muBhaibheri.
Asi Satani haadi kuti vanhu vangotevera Jesu chete. Anoita kuti vanhu vade munhu anovatungamirira sepakakumbirwa nemaJuda kuti Sauro ave mambo wavo kuti vamutevere.
II MADZIMAMBO 25:13 VaKaradhea vakaputsanya mbiru dzendarira dzaiva mumba maJEHOVA, nezvingoro, nedziva rendarira, zvaiva mumba maJEHOVA, vakaenda nendarira yazvo Bhabhironi.
Babironi yakaparadza dziva reTembere, kana kuti mbiru dzendarira dzaidaidzwa zvakare kuti dziva rendarira vakatakura kuenda nazvo. Saka maKristu vanonyengerwa kusvika pakuparadza hurongwa hwaMwari nekutevera hutungamiri hwevanhu hunoenda nerumwe rutivi, sezvo sangano rimwe nerimwe kana kereke inotenda zvakasiyana nedzimwe.
Ipapo Jesu akashandisa dziva kuponesa munhu iye munhu aizotakura nhowo yake sechiratidzo chekuponeswa kwake uye chaive chakanyanya kukosha, semubairo wekutevera Jesu pachake pasina kuudzwa zvekuita nevanhu vanotungamira makereke, vanopokana ivo pachavo zvakadaro.
I MAKORONIKE 23:25 Nokuti Davidi wakati, "JEHOVA Mwari waIsiraeri wakazorodza vanhu vake; iye anogara Jerusaremu nokusingaperi,
26 Uye vaRevi havachazofaniri kutakura tabernakeri, nenhumbi dzayo dzokubata mabasa ayo."
MaJuda pavaive vamuJerusarema, vaive nezororo mumazuva aSoromoni, aive mwanakomana waDavidi. Kutonga kwake kwaive kuratidzirwa kwemakore 1 000 erugare, anozivikanwazve nekunzi “Mereniyamu”.
Nhowo yakagadzirirwa kuzorora. Tinoshandisa nhowo pahurwere kana zvichifanira kuti tidaro. Jesu aive ashandura nhowo yeurwere kuiita kuti iite basa rayo chairo, nhowo yekuzororera. Izvi zvinoratidza simba raMwari rekudzosera zvinhu zvazvaive.
Nekutakura nhowo yake, murume aive aporeswa aive akatakura zororo rake.
Hurwere nerufu zvinotigadza panhowo. Kutakura nhowo yeurwere kukunda pamusoro pezvinetso zvinounzwa nezvivi. Kumutswa kubva kuvakafa ndiko kukunda kwekupedzisira pamusoro pezvinetso zvinounzwa nzvivi.
JOHANE 5:11 Iye akapindura, akati: Uyo wandiporesa ndiye wakati kwandiri: Tora nhovo dzako, ufambe?
12 Vakamubvunza, vachiti: Ndianiko munhu uyo wakati kwaari: Tora nhovo dzako, ufambe?
13 Zvino wakanga aporeswa, haana kuziva kuti ndiani; nokuti Jesu wakanga abva, zvakwaiva navanhu vazhinji panzvimbo iyo.
Jesu haana kutsvaga mbiri kubva pakubata kwake. Zvakasiyana kwazvo nemapasita edu anhasi vanoenda kumawebhisaiti voudza pasi rese zvavanenge vaita, munyika yedu ino yechiKristu chemakwikwi.
Jesu akabva ayeuchidza munhu uyu kuti kwaive nenyaya huru yakadzama. Nekunge asangana naJesu, munhu uyu aifanira kudzokera kuhupenyu husina zvivi zvakare.
JOHANE 5:14 Shure kwaizvozvo Jesu akamuwana mutembere, akati kwaari: Tarira, waporeswa; usatadza zve, kuti urege kubatwa nechinhu chakaipa chinokunda chichi.
Sabata -- “usatadza zvakare”: Mweya Mutsvene kuti utiite kuti tisiye zvivi zvachose. Kusiya zvivi kwaive kwakakosha zvakanyanya kudarika simba rekuponesa. Munhu anenge aporeswa anofa. Tisina zvivi tinowana hupenyu husingaperi.
JOHANE 5:15 Zvino munhu uyo akandovudza vaJuda, kuti ndiJesu wakamuporesa.
Jerusarema raive guta guru rechitendero chchiJuda. MaJuda aya aive akabatwa kwazvo nekurudziro dzevatungamiri vezvitendero zvavo zvekuti havana kuda kutenda simba raJesu rekuporesa. Saka akabva aita zvinhu zvikuru kudarika vakuru vezvitendero zvavo zvakanyanya vakaita godo naye. MuJuda mumwe nemumwe aifunga kuti mutungamiri wechitendero chake aive mukuru, zvino mumwe munhu wekunze aive avakurira vese. MaJuda haana kukwanisa kuzvitambira kuti Mwari aive atanga kubuda muzvitendero zvavo. SemaKristu anhasi vanofunga kuti mwari akanyanya kutarisana nekereke yavo chete, kunyangwe kuine masangano 45000 akasiyana emakereke.
JOHANE 5:16 Saka vaJuda vakatambudza Jesu vakatsvaka kumuvuraya nokuti wakazviita izvozvo nesabata
Saka vakatora kuponesa “sekushanda”, vakashandisa chimiro chekuponesa ichi kudzivisa kuponesa musi weSabata. Dambudziko ravo guru raive kuratidzirwa vari vepasi zvakanyanya nekuti hapana pakati pemaJuda aikwanisa kuponesa munhu – Mwari ega ndiye aigona kuita izvozvo. Zvaireva kuti Jesu aiyanana naMwari kudarika vatungamiri vezvitendero zvavo.
Musi weSabata Mugovera maprista nevaRevi vaifanira kushanda muTembere vachiita mutambo wechitendero. Jesu aive Messiasi, Emanueri (zvichireva “Mwari Unesu”). Izvi zvega zvakamuita muPrista mukuru wechokwadi.
Vakafuratira chinhu chekuti varimi vaifanira kupa zvipfuwo zvavo mvura musi weMugovera. Kana nzombe ikawira mugomba vaitoiburitsa musi weMugovera. Asi kuponesa munhu vaive vasingakutendere. Vaitsvaga kwazvo kuwana chekupomera Jesu.
Zvakadaro maKristu mazhinji nhasi anoti pane chakakanganiswa muBhaibheri reKing James Vhezheni. Jesu ndiye Shoko. Saka maKristu anhasi achiri kuona chakaipa pana Jesu.
JOHANE 5:17 Asi Jesu wakapindura, akati: Baba vangu vanobata kusvikira zvino, neni ndinobata vo.
Nesimba rake rekuponesa akaratidza kuti Mwari aive naye nenzira yaisakwikwidzwa nevatungamiri vavo. Godo rakaipa mune zvechitendero rakavaita kuti vaite mitemo yavo vega isimo muMagwaro vakatanga kutuka wese aisatenderana navo nemitemo yavo isimo muMagwaro. Kunyanya kana munhu iyeye aive nekubata kukuru kudarika kwavo. Zvakangofanana nezvimiro zviri mumakereke nhasi.
Pasita umwe nemumwe anotonga zvakaoma, “Munofanira kutenda zvandinotaura nezvandinofunga ini chete”.
Saka Jesu nekutevera Magwaro, akava muvengi mukuru wevatungamiri vezvitendero.
JOHANE 5:18 Saka zvino vaJuda vakatsvaka zvikuru kumuvuraya, nokuti wakanga asingaputsi murairo wesabata bedzi, asi wakati vo Mwari ndiBaba vake, achizvienzanisa naMwari.
Vanhu havatendi kuti Jesu ndiMwari pachake.
JOHANE 5:19 Zvino Jesu akapindura, akati kwavari: Zvirokwazvo, zvirokwazvo, ndinoti kwamuri: Mwanakomana hagoni kuita chinhu oga, kana asingavoni Baba vachichita; nokuti zvose zvavanoita ivo, Mwanakomana unozviita saizvozvo vo.
Mwari aifanira kuva ari maari. Hakunomunhu aikwanisa kuita zvaaiita. Aifanira kuva Mwari aive maari aive nesimba iroro.
JOHANE 5:20 Nokuti Baba vanoda Mwanakomana, vanomuratidza zvose zvavanoita vamene; vachamuratidza mabasa makuru kunawawa, kuti mushamiswe.
Simba raJesu rekuita zvinhu zvemweya unoshamisa raifanira kuratidza maJuda kuti Aive ani.
JOHANE 5:21 Nokuti Baba sezvavanomutsa vakafa, vachivararamisa, saizvozvo Mwanakomana unoraramisa vo vaanoda kuraramisa.
Jesu akagona kumutsa vakafa. Chakanyanya kukosha, akagona kupa kutenda kuvanhu vaive vakafa pamweya akavaita kuti vatende munaMwari akavapa rudo rwekushandira Mwari.
JOHANE 5:22 Nokuti naBaba havatongi munhu, asi vakapa Mwanakomana kutonga kwose,
Mwari baba haasi Iye Mutongi. Zuva reKutongwa richaona Mwanakomana waMwari, Jesu, ari Mutongi mukuru.
Jesu akaita munhu akarurama wekunatsa nechokwadi chaMwari, nezvinodiwa nevanhu zvakaita senyasha nekuregerera. Jesu aive Mwari mukati Munhu kunze, saka ndiye ega murevereri anonzwisisa tese vanhu naMwari.
JOHANE 12:48 Unondiramba, asingagamuchiri mashoko angu, unomumwe, unomutonga; shoko randakareva ndiro richamutonga nezuva rokupedzisira.
Pakupedzisira tichatongwa nezvakanyorwa muBhaibheri. Jesu ndiye Shoko raMwari. Saka Jesu ndiye achauya ari Mutongi.
Muprofita Danieri akaona vaiita kunge vanhu vaviri paZuva rekutongwa.
Wakwegura pamazuva ake akagara aripo aive nebvudzi jena raive rakaita sewigi yeshinda yemutongi. Bvudzi refu mucherechedzo wekuzvininipisa, mucherechedzo weMutongi anozvininipisa kuShoko raMwari.
DANIERI 7:9 "Ndikaramba ndakatarira kusvikira zvigaro zvoushe zvagadzwapo, mumwe akakwegura pamazuva ake akagarapo; nguvo yake yakanga yakachena sechando, uye vhudzi romusoro wake rakanga rakaita samakushe akanatswa; chigaro chake choushe chakanga chiri mirazvo yomoto, makumbo acho uri moto unopfuta.
DANIERI 7:13 "Ndikaona pane zvandakaratidzwa usiku, ndikaona mumwe akafanana noMwanakomana womunhu achiuya namakore okudenga, akasvika kune akakwegura pamazuva ake, vakamuswededza pamberi pake.
Wakakwegura pamazuva ake akagara aripo haangavi Mwari Baba nokuti Baba havatongi munhu.
Kuna Zvakazarurwa, Johane anoona Jesu ane bvudzi jena rakaita senguwani yeMutongi.
ZVAKAZARURWA 1:14 Musoro wake nevhudzi rake zvakanga zviri zvichena samakushe machena, sechando; meso ake akaita somurazvo womoto;
Chiratidzo chiri kuna Danieri chinodaidzwa kuti “kuratidzira hunhu hwemunhu”. Hunhu hweMutongi, tsitsi nechokwadi, zvinotsanangurwa sekuti tsitsi nechokwadi vanhu vaviri vakasiyana. Asi hunhu uhu hwese hunosanagana munaJesu. SeMwanakomana wemunhu iye munhu pamwechete nesu anoda kuratidza tsitsi kwatiri, asi seWakwegura pamazuva ake akagara aripo (Jesu akagara aripo kubva pakutanga) anofanira kutonga zvakarurama neShoko rinova Chokwadi. Saka ndiye ega anokwanisa kuratidzira nyasha, tsitsi nechokwadi.
MAPISAREMA 85:10 Ngoni nezvokwadi zvakasangana; Kururama norugare zvakatsvodana.
JOHANE 5:23 Kuti vose vakudze Mwanakomana sezvavanokudza baba. Usingakudzi Mwanakomana, haakudzi naBaba, vakamutuma
Mwanakomana Munhu uyo Mwari Baba, vanova Mweya, vanogara maari.
Kuramba Jesu kunoita kuti murambe Mwari anogara maari.
JOHANE 5:24 Zvirokwazvo, zvirokwazvo, ndinoti kwamuri: Unonzwa shoko rangu, nokutenda wakandituma, unovupenyu bwusingaperi; haavuyi mukutongwa, asi wabva murufu.waenda, muvupenyu.
Jesu anokunda ruponeso kubva kuzvivi paCalvari, kupfurikidza zano rake riri muMagwaro. Sezvo tisingagoni kuzviponesa, zvakakosha kuti titende nekutevera Magwaro sezvo ari ndiwo nzira yega yekukwira kuDenga.
JOHANE 5:25 Zvirokwazvo, zvirokwazvo, ndinoti kwamuri: Nguva inovuya, nazvino yatovapo, nayo vakafa vachanzwa inzwi roMwanakomana waMwari; vanonzwa vachararama.
Rumuko rwekutanga rwaive rwoda kuitika apo vatsvene veTestamente Yekare vaizomutswa kubva kuvakafa.
Jesu paakafa akatakura zvivi zvedu kuenda nazvo kugehena akanozvirasira pana Diaborosi. Paaidzoka kubvako akadana vatsvene vemuparadhiso yeTestamente Yekare vaive vakafa vakamuka mumashure mekutanga kumuka kwake iye.
MATEO 27:52 Mabwiro akazaruka nemitumbu mizhinji yavatsvene vakanga vavete yakamutsva.
MATEO 27:53 Vakabuda pamabwiro iye amuka vakapinda muguta dzvene. Vakavonekwa navazhinji.
Kumuka kwevakafa ndihwo humbowo hwakazara hwekuti Mwari ane simba rehupenyu pamusoro perufu.
JOHANE 5:26 Nokuti baba sezvavanovupenyu mavari, saizvozvo vo vakapa Mwanakomana, kuti ave novupenyu maari.
JOHANE 5:27 Vakamupa simba rokutonga, zvaari Mwanakomana womunhu.
Zvakare zvinotsigirwa kuti Jesu ndiye Mutongi. Wakwegura pamazuva ake akagara aripo zvinoreva kuti akanga aripo kwenguva refu kwazvo kubva pakutanga ane huchenjeri. Hamugoni kumunyengera. Mwanakomana wemunhu zvinoreva kuti iye munhu zvakare, anotinzwisisa.
Huchenjeri nekunzwisisa, zvinomuita mutongi akarurama.
JOHANE 5:28 Musashamiswa naizvozvo; nokuti nguva inovuya, nayo vose vari mumabwiro vachanzwa inzwi rake,
Vatendi vekuTestamente Yekare vaizomuka kubva kuvakafa pashure pekumuka kwake Iye vokwira naye kuDenga segore (rezvapupu).
JOHANE 5:29 Vachabuda; avo vakaita zvakanaka, kukumuka kwovupenyu avo vakaita zvakaipa, kukumuka kwokurashiwa.
Kumuka kubva kuvakafa kuviri uku kwakapatsanurwa nemakore zviuru zvitatu.
Kumutswa kubva kuvakafa kwehupenyu kwakaitika chinguvana mumashure mekumuka kwaJesu.
Pakupera kwemakore 2000 enhorondo yekereke kuchauya chiuru chemakore erugare, kwozouya kumutswa kwevakafa vose zvino vasingatendi vemuTestamente yekare, vose nevakabva munguva nomwe dzemakereke, vachamukira kurashwa.
Vanhu vanofunga kuti vhesi rimwechete iri haringatsananguri zviitiko zviviri zvakapatsanurwa nemakore zviuru zvitatu. Asi tinowana mavhesi mazhinji muMagwaro anotsanangura izvi.
Semuenzaniso, Jesu anoverenga kubva kuna muprofita Isaya Chitsauko 61:1-2.
RUKA 4:18 Mweya waShe uri pamusoro pangu, Nokuti wakandizodza, kuti ndiparidzire varombo Evangeri; Wakandituma kuti ndizivise vakatapwa kusunungurwa kwavo; Namapofu kuti avone zve; Ndiregedze vakatsikirirwa;
RUKA 4:19 Nokuzivisa gore raShe rakanaka.
Asi Jesu akangoverenga hafu yevhesi 2. Tarisai kuti vhesi chairo rekutanga kunaIsaya rinotii:
ISAYA 61:2 Kuti ndiparidzire gore rengoni dzaJEHOVA, nezuva rokutsiva raMwari wedu; kuti ndinyaradze vose vanochema;
Gore rengoni rinotaura pamusoro peKuuya kwake kwekutanga. Zuva rekutsiva kwaMwari wedu, chikamu chechipiri chevhesi chisina kuverengwa naJesu, chinomiririra nguva yeKutambudzika kukuru kwaizouya makore 2000 aizotevera.
JOHANE 5:30 Handigoni kuita chinhu ndoga; ndinotonga sezvandinonzwa; kutonga kwangu kwakarurama, nokuti handitsvaki kuda kwangu, asi kuda kwaBaba vakandituma.
Chakavanzika chekubudirira kwaJesu ndechekuti haana kutsvaka kuita kuda kwake. Ndiwo muenzaniso watinofanira kutevera. Jesu aive akatarisana nekuda kwaMwari nekuti kuzara kwevuMwari kwaigara maari pamuviri.
Uyu ndiwo muenzaniso wedu.
Kana chidimbu cheMweya waMwari chichigara matiri, isuwo tinozofadzwa nekuita kuda kwaMwari. Kuda kwedu isu kunonyangarika kworega kuonekwazve.
JOHANE 5:31 Kana ndichizvipupurira, kupupura kwangu hakuzi kwazvokwadi.
Hatifaniri kuzvikoshesa. Hatifaniri kuzvitsvagira meso evanhu kuti atarise patiri.
JOHANE 5:32 Mumwe uripo unondipupurira; ndinoziva kuti kupupura kwake kwaanondipupurira ndokwe zvokwadi
Johane Mubapatidzi, muprofita mukuru, aive ari chapupu chaJesu.
JOHANE 5:33 Makatuma kunaJohane, iye akapupura zvokwadi.
JOHANE 5:34 Ini handigamuchiri kupupura kunobva kumunhu, asi ndinoreva izvozvo kuti muponeswe.
Asi Jesu haadi kutsigirwa nechero munhu. Kugamuchirwa nevanhu vanotungamirira hakusi muhurongwa hwaMwari. Zvino Jesu aive achiedza kuvayambira pamusoro pekukanganisa kukuru kunoitwa nevanhu kana vasangana nemuprofita. Kunyanya mweya waEria waizouya kuuya kwaJesu kwekutanga kusati kwasvika. Mweya waEria uyu waive muna Johane Mubapatidzi. Asi vateveri vaJohane vaifanira kuponeswa kubva pakukanganisa kukuru kwavaive vaita. (kukanganisa kumwechete kuchaitwa nevateveri vaWilliam Branham Kuuya kwechipiri kusati kwasvika).
JOHANE 5:35 Iye wakanga ari mwenje unopfuta nounovheneka; imi makanga muchida kufara nguva duku muchiedza chake.
Johane Mubapatidzi aive pamusoro kwazvo pevaparidzi vezuva rake. Aigonesa, vateveri vake vaifadzwa nechiedza chaaive aratidza murima remweya remazuva ake. Saka vateveri vaJohane vakaramba vachifara muchiedza chake.
Zvese zvaive zvotaurwa zvaive pamusoro paJohane.
Vaingotevera Johane. Mukusimudzira kwavo Johane vakarasikirwa newavairatidzwa naJohane, wavaifanira kutevera Jesu.
JOHANE 1:35 Ava mangwana zve Johane wakanga amire navadzidzi vake vaviri;
36 Akatarisisa Jesu achifamba, akati: Tarirai, Gwaiana raMwari!
37 Ivavo vadzidzi vaviri, vakamunzwa achitaura, vakatevera Jesu.
Jesu aive akakosha kudarika Johane.
Mumwe wevadzidzi vake ava aive Andireya.
Andireya ndiye ega mudzidzi waJohane Mubapatidzi akazoita Mudzidzi waJesu uye muapostora.
Johane aivepo kunongedzera Jesu Munhu aifamba pakati pevanhu.
Zvino vaya vakanzwa Johane achitaura, vakanzwisisa zvaitaurwa naJohane, vaizotevera Jesu.
Vaya vakanzwa Johane achitaura vaifanira kunzwisisa zvaaitaura nezvazvo. Vakaburitsa izvi pachena nekutevera kwavakaita Jesu. Vakaona kuti Jesu aive akakosha kudarika Johane.
JOHANE 5:36 Ini ndinechapupu chikuru kunaJohane; nokuti mabasa andakapiwa naBaba; kuti ndiapedze, iwo mabasa andinoita, ndiwo anondipupurira kuti Baba vakandituma.
Panguva yekupedzisira William Branham anofanira kuzivisa Jesu achifamba nemapeji eBhaibheri Shoko rake.
Vaya vakanzwisisa zvakataurwa nehama Branham, vanozotevera Jesu kupfurikidza Bhaibheri vachitsigira kutenda kwavo nezvakanyorwa muMagwaro chete.
Asi saJohane Mubapatidzi, vadzidzi vaWilliam Branham vashoma kwazvo vachava vadzidzi vaJesu, Shoko rakaziviswa.
JOHANE 5:37 Naivo Baba, vakandituma, ndivo vakandipupurira vo. Hamuna kutongonzwa inzwi ravo, kana kuvona mufananidzo wavo.
Hatina kuvimbiswa Izwi raMwari panguva yekupedzisira. Hatigoni kuona mufananidzo waMwari.
Jesu anogarotaura pamusoro peMagwaro aakazadzisa sehumbowo hwekuti Mwari aive akamutuma.
Hombowo hweruwadzano rwedu naMwari kuterera kwedu Shoko raMwari rakanyorwa hwoita humbowo hwekuti tinonzwisisa Bhaibheri. Kana tine zaruriro duku, tinenge tinekunzwisisa kuduku pamusoro peMagwaro. Kunzwisisa kuduku kwekuti Jesu anofunga sei.
JOHANE 5:38 Shoko ravo harigari mukati menyu, nokuti hamutendi wavakatuma.
Tinofanira kungogara muMagwaro, toverenga Magwaro nekunzwisisa, pachinzvimbo chekuedza kushandura mazwi atakabata paitaura vanhu tichiita tsananguro zhinji nawo.
Kuturikirwa kwakasiyana-siyana kwemazwi akabatwa paitaura vanhu hakubvi muShoko.
Dzidziso dzinobva pamazwi akasarudzwa akabatwa paitaura vanhu haabvi muMagwaro zvakangofanana neTirimiti.
Tinoudzwa kuti tinzvere Magwaro.
JOHANE 5:39 Munonzvera Magwaro, nokuti munoti vupenyu bwusingaperi munabwo maari; ndiwo anondipupurira ini.
Tarirai kutaura kusimo muMagwaro uku kwakaitwa nevanhu veMharidzo:
“Ndiri muMharidzo” kana kuti “Ndiri mutendi wemharidzo”.
“Mharidzo dzehama Branham ndidzo “Izwi raMwari”.
"Munowana kupona chete kana muri mumharidzo”
“Pasita ndiye musoro wekereke”
“Hamugoni kutonga pasita”
“Mukadzi achatonga America, saka Hillary achakunda musarudzo dzemutungamiri wenyika yeAmerica muna 2016”.
Hapana pakati pekutaura uku kuri muBhaibheri.
Kukunda kwaTrump musarudzo kwakaratidza kuti mapasita emharidzo ari kure sei nekuita kwaMwari.
JOHANE 5:40 Asi hamudi kuvuya kwandiri, kuti muve novupenyu.
MaKristu anoramba kuvaka kutenda kwawo paMagwaro nekuti havazivi zvinotaura Magwaro. Kune zvakawandisa zvekuverenga. Bhaibheri ibhuku rakakura. Mune zvikamu zvakaoma kunzwisisa. Ringori basa rakaoma.
Saka kubatanidza zvakabatwa paitaura vanhu zviri nyore kwazvo.
JOHANE 5:41 Handigamuchiri kukudzwa kunobva kuvanhu;
Vanhu vemakereke vanotya kwazvo kupokana napasita wavo.
Pokana napasita, vose iye nevanhu vemukereke make vanokudzinga.
Kana muchimira nechokwadi cheBhaibheri hamugamuchiri kukudzwa kubva kuvanhu vanoenda kumakereke.
JOHANE 5:42 Asindinokuzivai, kuti hamunorudo rwaMwari mukati menyu.
Asi mapasita vane kukakavadzana kwakawandisa pachavo. Havadzokera kuMagwaro kunoyananisa kutenda kwavo. Mapasita havabatanidzi Magwaro pamwechete kuti vatsigire zvavanotenda. Vanhu vanotsvaga kugamuchirwa nemapasita nekutenderana navo. Vanoda kwazvo kugamuchirwa zvekuti vanomhura nekuziva chero munhu anopokana napasita.
Rudo runoda kushandirwa nesimba. Kana tichida Mwari tinofanira kufarira Magwaro ake ese. Hatigoni kutaura kuti mune zvakakanganiswa kana kurwisana muBhaibheri reKing James Vhezheni. Tinofanira kurwa nezvikamu zvakaoma kunzwisisa kuti tidzidze chokwadi chazvo chakadzama. Rudo rwaMwari runogona kutikurudzira kuti titsvage Magwaro tisingafuratiri chero zvimwe zvikamu tichiti hazvina kukosha.
ZVIREVO 30:5 Shoko rimwe nerimwe raMwari rakanatswa; Ndiye nhovo yavose vanovanda maari.
JOHANE 5:43 Ndakavuya nezita raBaba vangu, asi hamuna kundigamuchira; kana mumwe akasvika nezita rake amene, muchamugamuchira iye.
Tinoda mazita evanhu. Tinosimudzira vanhu vanotungamirira makereke. Asi kana munhu akagara achitevera Magwaro zvakazara, tinomuramba.
JOHANE 5:44 Mungatenda seiko imi, iyemi munogamuchira kukudzwa mumwe kunomumwe, asi kukudzwa kunobva kunaMwari, oga, hamukutsvaki?
Vanhu vanoenda kumakereke vanosimudzira vatungamiri vavo vanodekara mukukudzwa uku vachizvitutumadza nekukosha kwavo. Vanoenda kumakereke vanoda kwazvo kutenderana nevatungamiri vemakereke avo kuitira kuti vatungamiri ava vavakudze nekuda kwekuvimbika uye kuterera kwavo.
MaJuda vaive nedambudziko rimwechete iri. Vaida kwazvo kutenderana nevakuru vezvitendero zvavo. Vatungamiri vezvitendero zvavo vaida kusimudzirwa pamusoro pevanhu, vachibatwa nekurumbidzwa kukuru uye kukudzwa. Kuzvikudza kunofambidzana mekuzvikoshesa. Vanhu vaikudza vatungamiri kuitira kuzviwanira ivo. Vaida kwazvo kuva chikamu cheboka rezvechitendero mavainzwa, nekufunga, kuti maive makakoshera kuponeswa kwavo.
JOHANE 5:45 Musati ndichakupomerai mhosva kunaBaba; mumwe uri’ko unokupomerai mhosva, ndiye Mosesi, wamakavimba naye.
MaJuda vaifunga kuti vaizoponeswa nekunamata muprofita Mosesi. Mosesi mumwechete uyu achavapoma.
MaJuda aishandisa zuva raMosesi reSabata kupomera Jesu nekuda kwekuponesa musi weMugovera. Asi mutemo waMosesi mumwechete iwoyo unoda kuti maPrista nevaRevi vashande basa rakarema mumutambo wekunamata weSabata muTembere. Jesu ndiye aive muPrista mukuru wechokwadi kumaJuda.
Vanhu vemharidzo vanotevera muprofita wenguva yekupedzisira, vachiturikira zvaakataura vachizviisa mudzidziso dzisina Magwaro anodzitsigira, vachapomerwa nehama Branham nekuti akavaudza kuti vatsigire zvaakataura neMagwaro. Haana kubvira ada kuti zvaakataura zvavanobata zvitsive Magwaro sezvo basa razvo raive rekuzivisa Magwaro.
JOHANE 5:46 Nokuti dai maitenda Mosesi, mungadai mainditenda ini, nokuti iye wakanyora zvangu
Mosesi akanyora pamusoro pemuprofita aizouya.
DEUTERONOMIO 18:18 Ndichavamutsira muporofita, unobva pakati pehama dzavo, wakafanana newe; ndichaisa mashoko angu mumuromo make, iye uchavaudza zvose zvandinomuraira.
Simba raJesu rinoshamisa rakamuita kuti ave muprofita aitevera Mosesi. Mosesi aive ataura kuti muprofita mukuru uyu aizova nezvizhinji zvekuudza maJuda. Saka vaifanira kumuterera.
Mosesi akavazivisa Gwaiana rechibairo rePaseka raive risina mhaka. Jesu aive Gwaiana rePaseka risina mhaka.
Mosesi akashambidza Aroni akamuzodza semuprista mukuru.
EKSODO 29:4 "Zvino uuye naAroni navanakomana vake kumukova wetende rokusangana, ugovashambidza nemvura;
EKSODO 29:7 Zvino unofanira kutora mafuta echizoro, uadire pamusoro wake, umuzodze.
Johane Mubapatidzi akasuka Jesu murwizi rweJorodani, akatarisa achiona Mweya Mutsvene uchiburukira paari seNjiva kuti umuzodze paruzhinji semuPrista mukuru.
JOHANE 5:47 Asi kana musingatendi manyoro ake, mungatenda seiko mashoko angu?
MaJuda vaiti vaitevera Mosesi, asi vakangosarudza kutenda zvimwe zvezvaakataura.
Vakabva vashandura zvinhu zvakataurwa zvakaitwa nevanhu zvakawanda zvavakatora vakazviita mirairo yeSabata. Vakapesana nechinhu chinokosha -- chekuti Jesu akaita zvaive zvakanyorwa pamusoro pake muMagwaro. Kuisa vaFarise nevaSeduse pakutonga kunamata kwemaJuda chaive chinhu chakaipa, sezvo vanhu vaitungamirira zvitendero ava vakagadzira zvinhu zvakawanda zvaive zvisimo muMagwaro zvaifanira kutendwa mazviri nemaJuda.
MaJuda vaisada kutenda zvimwe zvinhu zvakanga zvakanyorwa naMosesi, nekuti zvaisatenderana neSinagogue dzavo dzaive dzisimo muMagwaro, nemaFarise nemaSeduse, vavaive vatora kuBabironi pavaive muhutapwa. Vaisarudza zvaitaurwa nevatungamiri vezvitendero zvavo, vachifuratira zvakawanda zvezvaive zvakanyorwa muTestamente Yekare. Kana mukaterera vatungamiri vezvitendero, munotanga kubva paMagwaro muchitevera zvavanofunga ivo.
Saka vakaramba Jesu nekuti aive Shoko raMwari rechokwadi.
MaKristu vanoramba zvimwe zvikamu zveBhaibheri nhasi nekuti Bhaibheri harina kutaura nezveKisimusi, kana kupemberera kuzvarwa kwaKristu, kana 25 Zvita kana muti weKisimusi nezvimwe zvakadaro. Asi maKristu vanoda kuita mhemberero huru idzi. Vanoda kubatira Mwari nenzira dzavo, kwete nzira dzeBhaibheri. Chingonongedzerai kuti 25 Zvita raive zuva rakaberekwa Mwari wezuva wemapegani munobva maona kushaiwa mbiri kwamunoita.
Vanhu vemharidzo havagoni kunongedza chero Gwaro rinoti:
“Pasita anotonga kereke”
“Zvakabatwa paitaura William Branham ndizvo Zvikuru”
“Gore akaonekwa muna 1963 raive Mutumwa mukuru wekuna Zvakazarurwa Chitsauko 10 achiuya pasi panyika”.
"Mutumwa mukuru wekunaZvakazarurwa Chitsauko 10 anouya pasi panyika William Branham ari panyika”.
“Zvisimbiso zvinomwe zvekuna Zvakazarurwa Chitsauko 6 zvakazarurwa kare”.
Kuzvisanganisa mudzidziso dzakadai kunoreva kuti hamuzoteveri zvakabatwa paitaura hama Branham muchizvipima neMagwaro, sezvo zvese zvakaturikirwa pamusoro apa hazvimo muMagwaro. Saka nekutevera zvavakabata paitaura muprofita, vanhu vemharidzo havachateveri Magwaro.
Jesu haagoni kuwana makereke emharidzo anotenda mashoko ake akanyorwa muBhaibheri. Saka Jesu, seShoko, akamanikidzwa nhasi uno kumira kunze kwekereke yenguva yekupedzisira yeRaodikia. Sekurambwa kwakaitwa Jesu nemaJuda muimba yaPirato yekutonga. Vanhu vanoda zvavakabata paitaura vatungamiri vezvitendero zvavo – havachada Shoko raMwari chairo.